Jadwalka Jadwalka Daboolka Warshadda | Jadwalka Miisaanka Shiinaha wuxuu daboolaa Soosaarayaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha
Tababareyaasha Daabacan Custom
Ku habboon munaasabadaha suuqgeynta kala duwan, bandhigyada ganacsiga, iyo soosaarka wax soo saarka cusub, orod miiska caadada u ah wuxuu sameyn karaa aragti qoto dheer oo xoog leh oo ku saabsan dadka "socda". Ku qor daabacadahaaga iyo hal ku dhigyada miiska orodka, fariintaada muhiimka ah waxay dadka ku gaareysaa daqiiqado gudahood.
8ft Daboolida Miiska Beddelaya
Daboolka miiska la beddeli karo ama la hagaajin karo ayaa ku habboon dhacdooyinka suuq-geynta kala duwan, bandhigyada, bandhigyada ganacsiga iyo inbadan. Iyada oo leh miis quruxsan oo la beddeli karo, waxaad heli doontaa laba xayeysiis oo kala duwan oo dhiirrigelin ah, maaddaama miiskeena la tuurayo aan laga beddeli karin oo keliya 8ft tuuro illaa 6ft tuurid laakiin sidoo kale laga tuuro 8ft ilaa 6ft daboolka la rakibay.
Jadwalka miisaska leh daboolka furan
Nooca miiska la tuuro ama miiska daboolkiisu waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee soo ururinta dharka miiska ee badanaa loo isticmaalo bandhigyada ganacsiga, bandhigyada ama bandhigyada. Naqshadaynta fudud iyo goynta nadiifka ah ayaa caan ku ah in badan oo show-goers ah. Haddii aad rabto inaad soo bandhigto astaantaada ama astaantaada, 3-dhinac caadooyinka daabacan ee daabacan hubaal waa xulashadaada ugu fiican.
Jadwalka Jadwalka Jadwalka Jadwalka
Soo bandhigida nashqad nadiif ah oo nadiif ah, miiska caadada ah ee loo tuuro ayaa si fudud u muujin kara astaantaada, astaantaada ama fariinta muhiimka ah ee aad rabto inaad muujiso oo aad gudbiso. Kani waa nooceena ugu fudud, laakiin midka ugu caansan ee badanaa lagu isticmaalo bandhig ganacsi ama carwo.
Daboolida Miiska Wareegga Wareegtada ah
Intii aad soo bandhigi lahayd astaantaada iyo garaafkaaga aragti aan caddayn oo ka tagtay miiska oo laga tuuray masaafo dheer, miis noocan oo kale ah oo loogu talagalay wadahadallada u dhexeeya 2 qof ayaa hubaal ah inuu si dhow u eegayo astaantaada, sidaas awgeedna si weyn kor ugu qaadaya aqoonsigaaga astaanta ah.
Shaxda Iskuxidhka Jadwalka Wareegga Wareegga
Marabtaa inaad xiriir dhaw la yeelato macaamiishaada mustaqbalka? Ku martiqaad isaga ama iyadu inay fariistaan ​​miiska wareega oo ay bilaabaan hadalkaaga wacan.
Jaaniska miiska noocan ah waxaa loogu talagalay inuu daboolo baahiyahaaga. Astaantaada astaanta u ah maryaha miiska waa mid la arki karo oo waxtar u leh qancinta macaamiishaada sidaas darteedna waxay si weyn kor ugu qaadaysaa aqoonsigaaga sumcadda.